Rugby – «Adin’ny samy ngeza» : hotanterahina ny 17 jona ny famaranana | NewsMada
Rugby – «Adin’ny samy ngeza» : hotanterahina ny 17 jona ny famaranana
Par Taratra sur 05/06/2018
Tontosa soa aman-tsara, ny alahady 4 jona lasa teo, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny lalao manasa-dalana roa, eo amin’ny lalao baolina lavalava, karakarain’ny fikambanana Les As 38. Famaranana roa goavam-be, no hotanterahina ny alahady 17 jona, ho avy izao. Andaniny, TFA Anatihazo, hifandona amin’ny TFMA Ankasina (Boaikely manohitra). Ankilany, FTM Manjakaray (Dakar) hifampitana amin’ny 3FB (Zef’be). Hotolorana omby mifahy sy lelavola 1 tapitrisa Ar miampy amboara, izay ho mpandresy ary lelavola 1 tapitrisa Ar sy amboara kosa ny an’ireo resy.
Nitondra ny teny fisaorana, ho an’ny Malagasy rugby sy ireo fileovana rehetra nandray anjara, ka nampizotra an-tsakany sy an-davany, ireo lalao manasa-dalana, ny fikambanana Les As, tamin’ny alalan-dRandriantsoa Radouh.
“Tafita ny hafatra, saingy tsy mbola tratra ny tanjona. Mbola miantso ireo mpankafy, ho tonga maro amin’ny famaranana, izahay. Mankasitraka ny toe-tsaina “fair-play”, nasehon’ny ekipa rehetra, ihany koa ny Les As 38”, hoy izy.
Nilaza ny fikambanana Les As, fa tsy hitsahatra eo ny fifaninanana karakarain’izy ireo fa hisy tohiny ka ny toe-tsaina hitondrana izany dia hihavao hatrany. Tsiahivina fa tafiditra ao anatin’ny fiverenana an-doharano sy fampiraisana indray ary fandravonana ny olana nisy teo amin’ny tontolon’ny baolina lavalava, ny zava-kinendrin’ny fikambanana Les As.